Qaladaadkii Ay Kooxda Liverpool Ku Gashay Garoonka Stamford Bridge Yaa Masuul Ka Ahaa Waakan Macalin Klopp Oo Ka Hadlaaya? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa tilmaamay qaladaad waaweyn oo ay sameeyeen ciyaartoygiisu kulankii ay xalay Chelsea ku garaacday Stamford Bridge ee ay 2-0 kaga reebtay tartanka FA Cup.
Laba gool oo ay dhaliyeen Willian iyo Ross Barkley ayaa Blues u diray wareegga 8-da, isla markaana sii kordhiyey guul-darrooyinka xidhiidhka ah ee Liverpool soo hoynaysay labadii toddobaad ee u dambeeyey, kuwaas oo kasoo bilaabmay Atletico Madrid, Watford iyo xalay oo Chelsea ay karbaashtay.
Goolka koowaad ee Chelsea ayaa ku yimid kubbad ka fakatay Fabinho taas oo laag awood badan uu ku ganay Willian oo qasab ku marsiiyey goolhaye Adrian, mid labaadna waxa ku daray Barkley oo meel 30 yard u jirta goolka Liverpool toogasho uu ka sameeyey shabaqa ku dhex-dhigay.
Tababare Klopp oo ciyaarta kaddib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu calaamadiyey farqiga u dhexeeyay guul-darradii Watford iyo middii Chelsea ee xalay, waxaanu si cad u tilmaamay qaladaadka waaweyn ee ay kooxdiisu samaysay, waxaanu yidhi: “Bandhigga caawa (xalay) gebi ahaanba wuu ka duwanaa midkii Watford. Ciyaartii Watford xaqiiqdii waxay ahayd mid aad u xun, laakiin caawa (xalay) may xumayn, waxayna ahayd ciyaar aad u adag.
“Waxa aanu samaynay toddoba isbeddel, waana sababta keentay qaladaadka. Waxay jiri doona meelo kala duwan iyo meelo badan oo khadka dhexe ah, waxa jiri doona dardar badan oo dhexda ah. Bandhiggana kama walaacsani, laakiin haddii aad samayso qaladaad xunxun, waad guul-darraysanaysaa ciyaaraha.” Ayuu raaciyey Jurgen Klopp.
Macallinka reer Germany waxa uu sheegay in inkasta oo aanay wanaagsanayn guul-darro 2-0 ah, haddana ay sahlan tahay inuu sharraxaad ka bixiyo, waxaanu yidhi: “Inaad 2-0 ku guul-darraysato maaha wax fiican, laakiin way sahlan tahay in kiiskan aad sharraxdo. Waxa aanu samaynay laba qalad oo waaweyn oo goolasha sababay.
“Adrian wuxuu sameeyey badbaadin heersare ah hal ama laba ilbidhiqi ka hor, kubbaddana runtii way duulaysay waxaanay ahayd toogasho fiican oo ka timid Willian taas oo aanu badbaadin karaynin. Laakiin taas ka hor, kubadda ayaanu luminay dhibaataduna taas ayay ahayd.” Ayuu ku daray.
Liverpool waxa ugu dambaysay inay wareegga 8-da tartanka FA gaadho sannadkii 2015, laakiin tababare Klopp uma arko inay tahay guul-darradii ugu weynayd ee kooxdiisa haleesha, waxaanu yidhi: “May ahayn naxdintayadii ugu weynayd, tanina way ka dhacdaa kubadda cagta. Waxaan ka helay sida aanu uga falcelinay iyo sidii aanu u ciyaarnay, laakiin waxay ahayd ciyaar adag oo labada kooxoodba ay u yaacayeen si waalan.”